Pyae Phyo (MMiTD): 2017
♪ Game တွေရဲ့ ရွှေတွေပိုက်ဆံတွေကို Hack နိုင် ၊ App တွေ Game တွေကို Full Version ပြုလုပ်နိုင်တဲ့ - Lucky Patcher v6.7.4 Apk (10-Nov) ♫
အခုတင်ပေးလိုက်တဲ့ Luck Patcher ကိုတော့ နောက်ဆုံးထွက် Version လေးတင်ပေးထားပါတယ်ဗျာ။ Apk ကိုဒေါင်းယူနိုင်သလိုပဲ အသုံးပြုပုံပြုနည်းကိုပါ တင်ပေးထားပါတယ်ဗျာ။ အသုံးပြုနည်းကိုရေးသားပေးသူ ကတော့ ကိုဒီမွန်း ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။
ဒီapkလေးကိုအသုံးပြုပီးတော်တော်များများပြုလုပ်လို့ရပါတယ်။အကိုသိသလောက်အနည်းငယ်ရေးသားထား တဲ့စာအုပ်လေးဖြစ်ပါတယ်။ ခုအကိုရေးထားတာထက်ပိုပြီးပြုလုပ်လို့ ရပါသေးတယ်။ အကိုက ဒီ apkလေးကို မသုံးတတ်သေးတဲ့ ညီလေးညီမလေးတွေအတွက် လိုအပ်မည်ထင်တဲ့အရာလေးတွေကို ပုံလေးတွေနဲ့ တဆင့်ခြင်းအားလုံးနားလည်အောင် ရှင်းပြထားပါတယ်။ လိုအပ်တာရှိခဲ့ရင်အကိုညံ့လို့ဘဲ သဘောထားပေး ပါ။အကိုလဲအချိန်မရလို့သိပ်မလေ့လာဖြစ်ပါဘူး။ ခုဒီစာအုပ်လေးရေးပေး တာနှစ်ရက်လောက်လိုင်းပေါ် မတတ်ဖြစ်ပါဘူး။ကဲlucky patcherရဲ့အသုံးဝင်ပုံလေးကို မာတိကာ အနေနဲ့ရေးထားပေးပါတယ်။
၁ ။ ။ rootမရှိတဲ့ဖုန်းတွေမှာ ဂိမ်းပိုက်စံနဲ့ရွှေတွေကိုlucky patcherသုံးပီး hackယူပုံ။ rootမရှိတဲ့ ဖုန်းမျာကဂိမ်းပိုက်စံနဲ့ရွှေတွေhackယူတာတခုမျှသာရနိုင်မှာပါ။
၂။ ။ rootရှိတဲ့ဖုန်းတွေမှာlucky patcher ကိုအမျိုးမျိုး အသုံးပြုပုံ။ဖုန်းမှာrootရှိနေတယ်ဆိုရင်lucky patcherရဲ့ အနှစ်သာရကိုအပြည့်ဝကိုခံစားရပါမယ်။
၃။ ။ ဂိမ်းပိုက်စံနဲ့ရွှေကိုhackယူချင်းနှင့်သော့ခတ်ထားတဲ့အခန်းတွေကိုဖွင့်ယူခြင်း
၄။ ။ ဂိမ်းပိုက်စံနဲ့ရွှေကိုhackယူချင်းအပိုင်းနှစ်။ဂိမ်းတော်တော်များများကိုhackယူနိုင်ပါတယ်။
၅။ ။ ဖုန်းအတွင်းမင်မိုရီကပ်(internal SDcard) ထဲကဂိမ်းapkတွေကိုဖုန်းအပြင်မင်မိုရီကပ်(external SDcard) သို့ပြောင်းလွဲခြင်း။တချို့ဖုန်းကဖုန်းမင်မိုရီကအရမ်းနည်းပါတယ်။ခုလိုဂိမ်းတို့တခြားapkတွေကို
၆။ ။ ဖုန်းထဲမှာထဲ့ထားတဲ့(install လုပ်ထားတဲ့)apkတွေကိုဖုန်းရဲ့system.apkအဖြစ်ပြောင်းခြင်း
၇။ ။ တချို့apkတွေကာfull version မဖြစ်ဘဲ လိုင်စင်တောင်းပါတယ်။ဒီlucky patcherကိုသုံးပီး လိုင်စင်ဖြုတ်မယ်။fullversionအဖြစ်ပြုလုပ်နည်း
၈။ ။ ဖုန်းထဲထဲ့ထားတဲ့apkတွေကိုuninstallပြုလုပ်နည်းနဲ့backupလုပ်ပီးrestoreပြန်ပြုလုပ်နည်း
၁၀။ ။ ဖုန်းထဲရှိနေတဲ့apkတွေကိုdisable packageလုပ်ထားနည်း။ ဒီနည်းကိုနဲနဲရှင်းပြပါမယ်။ အကိုက အရမ်းသဘော်ကျတယ်။
၁၁။ ။ ပိုက်စံနဲ့ရောင်းတဲ့stickerတွေကိုfreeဒေါင်းယူနည်း။ဥပမာviberတို့lineတို့မှာရှိတဲ့ပိုက်စံနဲ့ရောင်းတဲ့
Lucky patcher.apkအသုံးပြုနည်းစာအုပ်ကိုအကိုရေးထားပေးတာအပိုင်းလေးပိုင်းဖြစ်သွားပါတယ်။ အာက်မှာအပိုင်းလေးပိုင်းလုံးတင်ထားပေးပါတယ်။အားလုံးဒေါင်းပီးလေ့လာပေါ့။
Lucky Patcher နောက်ဆုံးထွက် Version ကိုလိုချင်ရင်တော့ အောက်ဆုံးမှာဒေါင်းယူသွားနိုင်ပါတယ်။
♪ သီချင်းတွေ သံစဉ်တွေကို Professional ဆန်ဆန်ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးရယူနိုင်တဲ့ - FL Studio Mobile 3.1.81c Patched Apk + Data (Full Unlocked) ♫
FL Studio ကတော့ PC Version မှာကတည်းကနာမည်ကြီးပြီးလူသုံးများခဲ့တဲ့ Software တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အခု Android ဖုန်းတွေမှာပါအသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။ နောက်ဆုံးထွက်ထားတဲ့ Version လေးကိုပဲတင်ပေးလိုက်ပါ တယ်ဗျာ။ ကျွန်တော်အခုတင်ပေးလိုက်တာက Patched လုပ်ထားပြီးသား Full Unlocked Version ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ Feature အပြည့်အစုံကို အပြည့်အ၀အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ FL Studio ဟာဆိုရင် သီချင်းတွေသံစဉ်တွေကို ကိုယ်ပိုင်ဖန်တီးပေးနိုင်တဲ့ Application တစ်ခုပါ။ သီချင်းအတွက် သံစဉ်တွေကို တကယ့်ကို Professional အဖြစ်ဖန်တီးပေးနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်သာဖန်တီးနိုင်မှုအားကောင်း မယ်ဆိုရင် တကယ့်ကိုအဆင့်တန်းမှီတဲ့ Melody တွေကိုရရှိနိုင်မှာပါ။ Android OS 2.3.3 နှင့်အထက် ဖုန်းများမှာ အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ လုပ်ဆောင်ချက်အသေးစိတ်ကိုတော့ အောက်မှာရှင်းပြပေးထား ပါတယ်ဗျာ။ Apk + Obb ကိုခွဲပြီးတင်ပေး ထားပါတယ်ဗျာ။ Obb ကိုတော့ ကွန်နရှင်အခက်အခဲအရ ပြည်ပမှ ပညာရှင် တစ်ဦးရဲ့ Upload တင်ထားတဲ့ Link ကိုပဲညွှန်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ Installation လုပ်ပုံကိုတော့ အောက်မှာ တစ်ဆင့်ချင်းရေးပေးထားပါတယ်ဗျာ။
အမျိုးအစား: Android Application , Audio Editors
♪ မမြင်စေချင်တဲ့ဓါတ်ပုံတွေဗီဒီယိုတွေကိုဖွက်ထားပေးမယ့် - Gallery Vault Hide Video Photo PRO v3.2.10 Apk (14-Nov) ♫
♪ မိမိရဲ့ Personal Data တွေ Hack ခံရခြင်းမှ တားဆီးပေးနိုင်မယ့် - UnHackMe v9.40 Build 640 + Portable + Crack ♫
Software နာမည်နဲ့တင်သေလောက်တယ်ဗျာ UnHackMe တဲ့။ သူရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေကတော့ Software အကူအညီနဲ့ Attack လုပ်တဲ့ Hacker တွေရဲ့ရန်ကနေကာကွယ်ပေးနိုင်တယ် လို့ ခြုံငုံပြီးပြော ရင် ပိုမှန်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အင်တာနက်ကွန်နရှင်ရှိတဲ့စက်တွေနဲ့ Network ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ စက်တွေမှာ ရှိထားသင့်ပါတယ်။ မိမိရဲ့ စက်ထဲမှာ Install လုပ်ထားရုံနဲ့ မိမိမှာရှိတဲ့ Personal Data တွေ User Name နဲ့ Password တွေ အခိုးမခံရအောင် ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ 100% ကာကွယ်ပေးနိုင် တယ်လို့တော့ အာမမခံရဲဘူးဗျ။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ Hacker တွေကလည်း အတော်လေးကိုအစွမ်း ထက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Hacker တွေရဲ့ ရန်ကနေအတားအဆီးတစ်ခုတော့ ဖြစ်စေမှာပါ။ အမြဲတမ်း သုံးနိုင်အောင် Full Version အဖြစ် Crack File ကိုပါထည့်ပေးထားပါတယ် ဗျာ။ Windows 8/7/Vista/XP (32-bit/64-bit) စတဲ့ OS တွေမှာအသုံးပြု နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ အသေးစိတ်ကိုတော့ အောက်မှာ ဆက်လက်လေ့လာနိုင်ပါ တယ်ဗျာ။
UnHackMe 9.40 Build 640 + Portable + Crack , UnHackMe is specially designed to detect and remove Rootkits but also removes other forms of malware from Worms to Trojans and so on. A rootkit isaprogram thatahacker uses to mask intrusion and obtain administrator-level access toacomputer or computer network. The intruder installsarootkit onacomputer usingauser action, by exploitingaknown vulnerability or crackingapassword. The rootkit installsabackdoor giving the hacker full control of the computer. It hides their files, registry keys, process names, and network connections from your eyes. Your antivirus can not detect such programs because they use compression and encryption of its files so that’s where UnHackMe comes into play as it allows you to detect and remove them.
♪ ဖုန်းအလကားပြောနိုင်မယ့် - LINE Free Calls & Messages v7.15.2 Apk (6-Nov) ♫
Line ဆိုတာကတော့ အခုနောက်ပိုင်းမှာ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာတော်တော်လေးအသုံးများလာတဲ့ Application တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ အခုတင်ပေးလိုက်တာကတော့ နောက်ဆုံးထွက်ထားတဲ့ Version အသစ်တစ်ခုပါ။ သူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်ချက်တွေကတော့ ဒီကောင်လေးရှိသူအချင်းချင်း free call / free massage တွေ free video call ကိုအင်တာနက်လိုင်းရှိရုံနဲ့ပိုက်ဆံတပြားတချပ်မှမကုန်စေပဲ free စိတ်ကြိုက် အသုံးပြုနိူင်ပြီးလူကြိုက်များတဲ့ကောင်လေးပါပဲဗျာ ။ Version အသစ်လိုချင်သူများနဲ့အခုမှစပြီး အသုံးပြုချင် သူများ အောက်က Link မှာဒေါင်း ယူနိုင်ပါပြီဗျာ။